Arch Linux + Log Fametrahana KDE: Fametrahana KDE SC | Avy amin'ny Linux
Arch Linux + Log fametrahana fametrahana KDE: Fametrahana KDE SC
Efa hitantsika ny fomba apetraho ny Arch Linux ary amboary ny rafitra, ka tonga izao ny fotoana fametrahana KDE izay ny tontolon'ny Desktop ampiasaiko.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy apetrakay dia ireo fonosana mifandraika amin'ny Xorg. Satria samy manana ny filany avy ny tsirairay, izay tsy maintsy ataony dia ny manatanteraka:
Ity dia hamerina ny lisitry ny fonosana mifandraika amin'i Xorg toy izao:
:: Misy mpikambana 77 ao amin'ny vondrona xorg: :: Extra repository 1) font-misc-ethiopic 2) xf86-input-evdev 3) xf86-input-Joystick 4) xf86-input-keyboard 5) xf86-input-mouse 6) xf86-input-synaptics 7) xf86-input-vmmouse 8) xf86-input-void 9) xf86-video-ark 10) xf86-video-ast 11) xf86-video-ati 12) xf86-video-cirrus 13 ) xf86-video-dummy 14) xf86-video-fbdev 15) xf86-video-glint 16) xf86-video-i128 17) xf86-video-intel 18) xf86-video-mach64 19) xf86-video-ireo 20) xf86 -video-modesetting 21) xf86-video-neomagic 22) xf86-video-nouveau 23) xf86-video-nv 24) xf86-video-openchrome 25) xf86-video-r128 26) xf86-video-savage 27) xf86 - video-siliconmotion 28) xf86-video-sis 29) xf86-video-tdfx 30) xf86-video-trident 31) xf86-video-v4l 32) xf86-video-vesa 33) xf86-video-vmware 34) xf86- video -voodoo 35) xorg-bdftopcf 36) xorg-docs 37) xorg-font-util 38) xorg-fonts-100dpi 39) xorg-fonts-75dpi 40) xorg-fonts-encodings 41) xorg-iceauth 42) xorg- luit 43) xorg-mkbestdir 44) xorg-mkfontscale 45) xorg-server 46) xo rg-sessreg 47) xorg-setxkbmap 48) xorg-smproxy 49) xorg-x11perf 50) xorg-xauth 51) xorg-xbacklight 52) ​​xorg-xcmsdb 53) xorg-xcursorgen 54) xorg-xdpyinfo 55) xorg-xdriinfo 56) xorg-xev 57) xorg-xgamma 58) xorg-xhost 59) xorg-xinput 60) xorg-xkbcomp 61) xorg-xkbevd 62) xorg-xkbutils 63) xorg-xkill 64) xorg-xlsatoms 65) xorg-xlsclients 66) xorg-xmodmap 67) xorg-xpr 68) xorg-xprop 69) xorg-xrandr 70) xorg-xrdb 71) xorg-xrefresh 72) xorg-xset 73) xorg-xsetroot 74) xorg-xvinfo 75) xorg-xwd 76) xorg-xwininfo 77) xorg-xwud Ampidiro safidy (default = rehetra):
Mila mifidy ireo izay tadiavintsika fotsiny isika dia izay, apetraka eo alohan'izay tiana hapetraka ny isa. Raha misy safidy mihoatra ny iray dia manao safidy maromaro izahay manasaraka ny isa amin'ny koma.
Mametraka izao KDE afaka ataontsika amin'ny fomba 3 izany
Ity dia hametraka ireo fonosana toooooodoooossss KDE. Ity safidy ity dia maharitra ela kokoa amin'ireo fonosana ilainao alaina, fa hamela antsika hiomana ny tontolon'ny Desktop, miaraka amin'izay rehetra ilaintsika ary na izay tsy ilaintsika aza.
Ity safidy ity dia ahafahantsika mifehy bebe kokoa ny zavatra tiantsika hapetraka, satria mamela antsika hisafidy ireo fonosana meta mifandraika amin'ny lahasa KDE samihafa. Io no fomba nampiasako ary nety tamiko ny zava-drehetra.
Raha fantatsika izay tadiavintsika sy izay tokony hapetratsika ao aoriana, io safidy io dia miasa tsara ho antsika satria izay ilaina amintsika fotsiny no apetrany KDE miasa tsara. Avy eo dia hapetrakay ireo fonosana izay hampiasaintsika.
Ahoana raha tsy adinontsika ny mametraka ny fonosana miaraka amin'ireo safidy rehetra ireo:
Ankehitriny ho an'ny inona KDM manomboka tsy maintsy hampavitrika ny serivisy izahay:
Ary dia izay. Manomboka indray isika ary afaka miditra amin'ny KDE.
Fitaovana ilaina hafa
Vantany vao vita ny KDE dia tokony hiroso amin'ny fametrahana ny fonosana ilainy ny tsirairay. Raha ny ahy dia misy fisiefa be dia be ampiasako, izay tanisaiko etsy ambany:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Arch Linux + Log fametrahana fametrahana KDE: Fametrahana KDE SC
VeryManySecrets dia hoy izy:
Fanontaniana; Binaries izay apetrakao sa mampidina loharano sy manangona? Miala tsiny raha mangataka truism aho, fa tsy fantatro ny distro ary ny reko dia ny manangona amin'ny fomban'ny gentoo.
Valiny amin'ny TooManySecrets
Binaries. Ny fanangonana dia tsy voatery, amin'ny alàlan'ny fananganana script tsotra, izay tsy mahavaha ny fiankinan-doha, na koa mitantana ny safidy fanangonana; raha atao teny hafa, dia tsy misy toa an'i Gentoo mihitsy.
Nanampy ahy fotsiny ianao nanao ny dingana mba hanandramako Arch indray mandeha (efa an-taonany maro no naniriako azy, saingy najanoko foana io (hatramin'ny nanombohana nanambatra dia mampiasa FreeBSD aho 😉)).
Faly aho fa nanompo anao 🙂
mitroes dia hoy izy:
Andramo MANJARO, Arch ho an'ny olombelona
Mametraka tsotra tahaka ny Ubuntu
Ary avy eo raha tianao dia manana ny herin'ny arofanina rehetra ianao hanamboarana azy
Mitsitsia fotoana betsaka
Valiny amin'ny mitcoes
Arch _es_ ho an'ny olombelona 😉
Na dia eny aza, Manjaro dia miorina tsara ary mamonjy fotoana be dia be amin'ny fametrahana azy, andro vitsy lasa izay dia nanandrana ny 0.86 Openbox aho ary tena mandeha tsara izany, saika tiako kokoa noho ny ArchBang izany!
Mazava ho azy, ny kinova KDE SC an'ny Manjaro no zavatra matavy indrindra sy ratsy indrindra hitako>: [
Ariki dia hoy izy:
Andohalambo ho an'ny olombelona hahaha izay nampihomehy ahy, ny tena marina dia ny manisy andohalambo dia tsy dia sarotra loatra fa vao avy mandalo fotoana voalohany ianao fa rehefa zatra izany dia miala amin'ny OS araka ny itiavanao azy, ankoatr'izay dia tsara kokoa ny archwiki ao amin'ny andoid anao hanaraka azy!! Avelako ho an'ireo maniry izany ny rohy! miarahaba anao Ariki
Valio i Ariki
Omar3sau dia hoy izy:
Fanontaniana iray… lohahevitra plasma inona no ampiasainao? Hampiasa qtcurve ve ianao? Smaragd?
Valiny tamin'i Omar3sau
Mampiasa ny lohahevitra openSUSE aho. Ary eny, mampiasa QtCurve koa aho.
Tarkin dia hoy izy:
Miaraka amin'ny lohahevitra plasma ho an'ny Kde, Produkt ve no tianao holazaina? Raha izany ny variant tany am-boalohany (tonony volomboasary) na ilay kinova tafiditra ao amin'ny openuse 12.3 (tonony maitso), raha ity farany, azonao zaraina ve?
Valiny tamin'i Tarkin
Eny, ny variant openSUSE no tiako holazaina. Azonao atao ny misintona azy eto.
Azafady elav, fa maninona no manangana Arch + KDE anao manokana raha toa ka efa manana distro misy hevitra tsara dia tsara ianao, izany hoe CHAKRA?
Ny fahalalana fotsiny ny antony, angamba mety ho ergonomis ireo dingana rehetra ireo ianao, fa amin'ny fomba mitovy no isaorana anao, ampiana amin'ireo tianao!
Tsy tiako ny fehezin'izy ireo ny rindranasa tiako apetraka, ary mampiasa ny sasany izay GTK. Mitovy amin'ny Arch's ve ny repositories Chakra? Raha tsy izany dia tsy mety amiko, satria tsy maintsy mampidina ny fonosana amin'ny Internet aho ary tsy manampy ahy amin'izany ny fifandraisako. Heveriko fa ireo no antony roa lehibe.
Zana-tsipìka27 dia hoy izy:
Ao amin'ny Chackra ISO farany dia ampidirina netinstall izay mamela anao hanao fametrahana kely indrindra, mitovy amin'ny kdebase an'i Archlinux. Navelan'izy ireo koa ireo fonosana ary nampiditra tahiry fanampiny ho an'ny rindranasa GTK izy ireo.
Valiny amin'i Archeros27
Fa azoko atao ve ny mampiasa repositories Arch ihany?
Tsia, tsy mitovy ny tahiry. Misy fomba fampiasana azy ireo, saingy tsy tokony hasaina.
Mampalahelo fa tsy manompo ahy i Chakra 🙁
Ary efa nanandrana Slackware 14 ve ianao? Nanandrana aho ary ny KDE dia toa XFCE. Tena tiako izany distro izany satria azonao atao ny manamboatra solosaina finday ary manampy fiankinan-doha amin'ny slackpkg.
Ny tsara indrindra: ny console izay vita tsara (manampy anao hatramin'ny antsipiriany kely indrindra izy).
Ny test MANJARIO dia ex Chakra fa ankoatry ny maha tsotra azy dia maro ny birao ary mifanentana tanteraka.
Mitsitsia fotoana betsaka amin'ny preset tsara sy amin'ny fametrahana Ubuntu
Soso-kevitra kely ka rehefa vita ny fametrahana fotony dia mijanona farafaharatsiny farafaharatsiny farafaharatsiny, asaina asiana phonon-vlc, noho izany ny baiko dia:
raha tsy izany dia torolàlana tsara ho an'izay mbola tsy sahy.
Matetika rehefa mametraka kde pacman dia manontany anao hoe iza no phonom hapetraka.
Marina izany ... rehefa manao pacman ianao -S kdebase pacman manontany anao ny telefaona tianao hapetraka ...
Tiako i pacman! 😀
Talohan'izay dia nanana Arch niaraka tamin'i Gnome, Xfce ary KDE aho
Namely ireo fanavaozana lehibe foana aho ary niova noho ny hakamoana
Fa Arch no Arch, teny lehibe 😉
Mampiasà Slackware. Somary trite izy io, fa tsy amin'ny ambaratonga ananan'i Arch.
archdeb dia hoy izy:
elav, manome soso-kevitra aho: mamoaka torolàlana isan-tsokajiny amin'ny fametrahana Arch misy LVM voaroaka ary miaraka amin'ny fanohanan'ny TRIM ho an'ny SSD Te-hametraka Arch amin'ny solosaina findainy aho, fa tsy amin'ny torolàlana fametrahana ofisialy dia tsy mieritreritra an'izany izy ireo. ary heveriko fa mety hahasoa ny olona maro izany. Misaotra sy arahaba indrindra.
Mamaly an'i archdeb
Te hanampy anao aho fa tsy manana SSD hanaovana fitsapana .. ..
Eny, ny ampahany SSD no kely indrindra, saingy tadidiko tsara fa ny fametrahana safidy ao amin'ny cryptab, iray hafa ao amin'ny lvm ary iray hafa ao amin'ny partitions. Saingy sarotra ny fametrahana miaraka amin'ilay rafitra voahodina 100% sy LVM. Azoko atao ny mahita anao raha mila rohy izay azoko ianao izay nanazava ny fizotrany kely fa ho an'i Gentoo dia mety hanampy izany: p
Tena tsara ny andohalambo, fa ny lalan'ny andohalambo dia ny filozofia KISS + RTFM, noho izany azoko atao ny mametraka ny MATE + Openbox ary mametraka an'i Iceweasel ho toy ny mpizaha toerana mahazatra.
Ankoatr'izay, hisy ve ny kinova LTS an'ny Arch hampiasaina?
Mampiasa ArchLinux indray noho ny toro-làlana fametrahana azy.
Andao hojerentsika raha manandrana ARCH aho indray andro, raha mbola miaraka amin'i Mageia 3 miaraka amin'ny maritrano KDE 4.10.4 X86_64 aho
Tsy mahita mpilalao toa winamp an'ny kde D aho:
qmmp dia iray amin'ireo mpilalao maneno tsara indrindra ao amin'ny linux ary mitovy amin'ny winamp izany. Voasoratra amin'ny qt. Ny Equizer dia tsara na dia vitsy aza ny fantsona.
Google Audacious, ary lazao amiko raha nahita Linux mitovy amin'ny Winamp ianao.
servaviros dia hoy izy:
Efa ho dimy taona izao no niarahako tamin'i Arch ary raha mbola manohana ny famotsorana ity distro ity ny solosaina roa (birao dimy taona sy netbook iray taona) dia tsy hanova azy na inona na inona aho. rehefa tsy afaka mamindra azy ireo any Debian intsony aho. Efa ela aho no nampiasa Openbox teo amin'ny netbook sy teo amin'ny birao fa adala aho ary nametraka ny KDE tamin'ny kahie mba hitsapana. Tiako be ny KDE, ny zavatra ratsy dia ny mihinana ny bateria, ao amin'ny Openbox (aorian'ny fanamboarana azy) dia mila 10 minitra fotsiny mba haharetana ireo adiny 3 nijanonany tao amin'ny Windows ary miaraka amin'i KDE dia maharitra 2 ora fotsiny na firy na firy. programa na fanovana no ovako.
Ary farany, mangataka fiheverana betsaka na mihoatra noho ny sakaizanao ny Arch Linux: raha tsy havaozinao mandritra ny iray volana mahery ianao ary avy eo manapa-kevitra ny hanavao azy tampoka dia ho tapaka izany, raha manavao azy ianao nefa tsy mamaky vaovao dia hanao izany ianao azo antoka fa mandrava azy. Noho izany aza ilaozana ity distro ity ary raha mila zavatra ianao dia zahao aloha izay tsapany 🙂
Mamaly an'i serfraviros
Ny tsara indrindra dia ny fananana cd mivantana mora ampiasaina hidirana amin'ny tranokala ofisialy ary hamaky ny fomba hamahana ilay olana.
Etsy ankilany: misintona andohalambo !!!!
Nahasarika ny saiko ity distro ity, hojereko raha manam-potoana hitsapana azy aho amin'ity faran'ny herinandro ity.
Ampidiro sy ampifanaraho amin'ny Q Linux-QVV [Archives]
PyGTK 3: mini tutorial GUI miaraka amin'i Python + GTK + 3